दिमागको दाहिने भागलाई सक्रिय पार्ने पाँच तरिका
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्य स्वास्थ्य जीवनशैलीदिमागको दाहिने भागलाई सक्रिय पार्ने पाँच तरिका
विराटनगर, ३१ असार । रचनात्मकता एक सीप हो जुन समय अवधिमा सिक्ने प्रक्रिया र निरन्तर अभ्यासको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
सबै मानिस रचनात्मक हुनु सक्दैनन् भन्ने कुरा सत्य होइन । रचनात्मक वा थप रचनात्मक हुने सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको दिमागको दाहिने पट्टिकाे भागलाई प्रशिक्षण दिनु हो । मानव मस्तिष्क बायाँ र दायाँ गरी दुई भागमा विभाजित हुन्छ ।
दिमागका दुवै भागहरूले शरीरका विभिन्न भागहरू नियन्त्रण गर्नुका साथै यसका फरक कार्यहरू हुन्छन् ।
दिमागको दाहिनेपट्टि भागको प्रशिक्षणले भने रचनात्मकता र कल्पनालाई उत्तेजित गर्न सक्छ । दिमागको दाहिनेतर्फको भागलाई प्रशिक्षण गर्ने ५ सजिलो तरिका यसप्रकार छन्ः
१.ध्यान (मेडिटेसन) का शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य लाभहरू प्रशस्त छन् । ध्यानले दिमाग शान्त गर्नुका साथै केही कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्दछ ।
२. गाउने वा नयाँ साङ्गीतीक उपकरण बजाउन सिक्दा दुवै तार्किक ध्यान र संगीतको लागि सहज भावना आवश्यक हुन्छ । नयाँ प्रकारको संगीत सुन्नु वा वजाउनु पनि दिमागको दाहिने भागको लागि राम्रो मानिन्छ । यसले रचनात्मकता बढाउन मद्दत गर्छ ।
३. आफैंलाई खुशी पार्न र रचनात्मकता बढाउनको लागि एक शौक (हबी) हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बुनाई, सिलाई, चित्रकला वा बगैंचामा काम गर्न मन पराउनुहुन्छ भने आफ्नो शौक त्याग्नु हुँदैन । बरु यसको लागि नयाँ विचारहरू अन्वेषण गरेर आफूलाई प्रेरणा दिने प्रयास गर्नुपर्छ । यसले मस्तिष्कको दाहिने पट्टिको भागलाई सक्रिय गर्न मद्दत गर्छ ।
४. लेख्न, खान वा अन्य साना कामहरू गर्दा गैर-प्रभावशाली हात प्रयोग गर्नाले मस्तिष्कको दाँया भाग सक्रिय पार्न मद्दत गर्छ । शरीरको बाँया भाग मस्तिष्कको दाँयापट्टिको भागद्वारा नियन्त्रित छ । यी कार्यहरूले वास्तवमा मस्तिष्कलाई चुनौती दिन्छ र थप रचनात्मक बनाउँछ ।
५. केही अध्ययनहरूका अनुसार बाँया नासिकाबाट सास फेर्दा दाहिने दिमागलाई सक्रिय पार्न सकिन्छ । दाहिने नाकलाई आफ्नो औंलाले बन्द गरेर बाँया नासिकाबाट सास फेर्ने र त्यसपछि दाँया नाकिकाबाट सास फेर्ने गर्दा दिमागलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ । यो एक प्रकारको योगासन पनि हो । यसलाई अनुलोमबिलोम प्रानायाम पनि भनिन्छ ।
खोप लगाएपछि प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउन चिकेन सुप फलदायी